CLS DC-10-30F rinjiyeeyeen
Su'aal CLS DC-10-30F rinjiyeeyeen
1 sano 10 bilood ka hor #431 by Gh0stRider203
Qof kasta oo ay fursad u doonaya inuu rinjiyeeyeen a Me for, ee CLS DC-10? Waa rinjiyeeyeen ah mid aad u fudud, laakiin waxaan si dhab ah ma dareemaan sida dhibaato loogu la, daacad ah. Waxaan ku lifaaqan shot a mid ah sida ay u ekaan, sidoo kale sanam la tabeelooyin 2 waxa on.
Haddii qof wiling inaad tan samaysaan, waxaan aad iyo aad buu u mahad lahaa
painkit waxaa laga heli karaa halkan: www.commerciallevel.com/misc/DC10/DC10_paintkit.zip
1 sano 10 bilood ka hor #432 by Dariussssss
Waxaan ka dhigay malaha 100 a repaints for FlightGear sim horyaalka, laakiin repaints FSX waa out of my horyaalka. Waxaa dhab ahaan u egtahay wanaagsan.
1 sano 10 bilood ka hor #436 by Colonelwing
Sure qof awood u leeyihiin in ay sameeyaan shaqada ,,, heshiis weyn, waxaan idinku leeyahay!
1 sano 10 bilood ka hor #437 by Gh0stRider203
Maxaan posted ahaa kaliya mid ka mid ah jidhka oo buuxa, taas oo fud ... laakiin waxaa jira wax badan oo dheeraad ah oo ku in ka badan in.
The mid jidhka FULL leeyahay dhamaan lakabyada kala duwan ee PSD ah (taas oo ah PSD kaliya ee qalabka).
tanuna waa wixii folder ku eg marka aad u siibka ... lol prnt.sc/ej7rar
Waxaan aan la helay samirkii in dib-u-sameyn xabbadood sooctey lol
Time si ay u abuuraan page: seconds 2.648